Ilay 'tafio-drivotra ratsy indrindra tao anatin'ny 60 taona mahery' dia nanimba ny tranoben'ny parlementaona efa zato taona
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Tonga » Ilay 'tafio-drivotra ratsy indrindra tao anatin'ny 60 taona mahery' dia nanimba ny tranoben'ny parlementaona efa zato taona
Febroary 13, 2018
Trano parlemantera iray 100 taona tao Nuku'alofa renivohitr'i Tonga no nianjera tamin'ny tany tamin'ny tafio-drivotra ratsy indrindra namely ny firenena nosy tao anatin'ny 60 taona mahery.
Ny tafio-drivotra tropikaly sokajy 4 dia namely ny firenena nandritra ny alina, nanala ny tampon-trano sy nanongana ny herinaratra sy ny hazo. Ny biraon'ny National Emergency Management Office (NEMO) ao Tonga dia nilaza fa tsy misy trano sisa tsy simban'ny tafio-drivotra tropikaly, hoy ny Radio NZ. "Nandray anjara tamin'ny valin'ny voina nandritra ny 30-taona lasa aho ary io no toe-javatra ratsy indrindra nahazo ahy," hoy i Graham Kenna avy amin'ny NEMO.
Mbola tsy fantatra mazava hoe firy ny olona naratra vokatr'ilay tafiotra, na raha nisy maty. Ekipa mpitantana ny voina no miasa mba handrefesana ny haben'ny fahasimbana. Na izany aza, ny tranobe parlemantera taonjato zato dia anisan'ireo maty voarindra tamin'ny rafitra.
Nilaza ny Vokovoko Mena an'i Tonga ny haavon'ny fahasimban'ny voly, trano, zava-maniry ary fotodrafitrasa avo dia avo. Ny mpikambana iray tao amin'ny parlemanta teo aloha dia nilaza tamin'ny RNZ fa saika potika ny vokatra rehetra ao amin'ny nosy Eua.
Fanjakana vonjy taitra no nambaran'ny governemanta talohan'ny oram-baratra ary natsangana ny ivom-pialana. Nanamafy ny tafio-drivotra ny Office Met Met UK. Ny rivotra mahery 124 kilometatra isan'ora (200km / ora) no mahery indrindra nanimba ny nosy lehibe an'i Tonga hatramin'ny nanombohan'ny firaketana maoderina 60 taona lasa izay.
Tonga dia firenena nosy Pasifika izay misy nosy 170 mahery. Hita atsinanan'i Fidji sy avaratry Nouvelle Zélande izy io. Ny rivodoza Gita izao dia mankany amin'ny Fidji izay antenaina hivoatra amin'ny tafio-drivotra sokajy faha-5. Antenaina fa tsy hahatratra ireo ivon-toeran'ireo mponina lehibe ao amin'ny firenena izy. Nitohy nihahery ny tafiotra satria namela lalana fandringanana tany Samoa sy Samoa Amerikanina ny herinandro lasa teo.
Hetsika $ 1.1 miliara vaovao ao amin'ny seranam-piaramanidina Honolulu
"Free To Fly Act" nataon'i Virginia Congressman Brat notohanan'ny ICTP: fanokafana ireo fampiasam-bola an'habakabaka vahiny